အရူးမလင် လိုလူစား (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » အရူးမလင် လိုလူစား (၁)
အရူးမလင် လိုလူစား (၁)
Posted by ဦးဦးပါလေရာ on May 8, 2012 in Society & Lifestyle | 39 comments
ဆောင်ယူ…. သယ်လာ…. လေညှင်းရေ…….
ခင်မောင်တိုးသီချင်းသံလေးကြားလိုက်ရတော့ အစက မျက်စေ့လေးမှေး၊ နားလေးစွင့်ပြီး အရသာခံနေသေးတယ်။ ပြီးတော့မှ သတိရပြီး ခေါင်းက မတ်ကနဲ ထောင်သွားမိတယ်…။
အဲဒါ အဲဒါ ကျုပ်ဖုံးရဲ့ ringtune ။
ဖုံး… ဖုံး…. ဘယ်မလဲဖုံး……
ကမန်းကတမ်း ကွန်ပျူတာရှေ့ကထ၊ စာရေးစားပွဲဆီသွားပြီး အမှိုက်ပုံကြီးတခုနဲ့ တော်တော်တူနေတဲ့ စားပွဲပေါ်ကဟာတွေကို တခုပြီးတခု ဆွဲဖယ်လှန်လှောရှာတယ်။
လက်ဆွဲအိတ်ကိုအောက်ချ၊ ပလပ်စတစ်ဖိုင်တွေကို ဆွဲဖယ်၊ ဖတ်လက်စ ဈေးကွက်ဂျာနယ်နဲ့ ၀ိကလီးအလဲဗင်းကိုတွန်းထုတ်၊ ရေနွေးကြမ်းပန်းကန်ကိုရွှေ့၊ စာရွက်ပုံကြီးကိုကောက်ပွေ့ပြီးဖယ်လိုက်တော့မှ ရွှေကိုယ်တော်ဟန်းဖုံးက ထွက်ပေါ်တော်မူလာတယ်။
တဖက်ကဆက်တဲ့နာမည်ကိုကြည့်လိုက်တော့ … ရဲဘော်ဟောင်း…။
ဟဲလို လို့ ထူးရုံရှိသေး- ဟေ့ကောင် ငါအဲဒီကိုလာခဲ့မယ်… တဲ့..။ ဘုဆတ်ဆတ်လေသံနဲ့…။
စိတ်ထဲ တော်တော်ထူးဆန်းသွားတယ်..။ တကယ်တော့ ကျုပ်တို့ချင်း ညီရင်းအကိုတမျှ အလွန်ခင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပေမယ့် ခဏတဖြုတ်ဝင်လာတာမျိုးမှအပ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေးတွေ့လေ့မရှိကြဘူး။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေနဲ့ အလုပ်ကို စည်းခြားထားကြပြီး အပြင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ဆုံတတ်ကြပါတယ်။ ၀န်ထမ်းကလေးတွေရှေ့မှာ ကျုပ်တို့က လူကြီးတွေဖြစ်နေတော့ ပေါက်ကရလေးဆယ် လျှောက်ပြောလို့မဖြစ်တာကြောင့်လဲ ပါတာပေါ့။ အခုတခါတော့ ဒီကောင်က မလာစဖူး…….။
ဒါနဲ့ ကလေးတယောက်ကို ရေနွေးအိုးကြိုပြင်ခိုင်းပြီး စောင့်နေလိုက်တယ်။
ခဏကြာတော့ ကိုယ်တော် ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီး ကြွတော်မူလာတယ်။
ပြီးတော့ ကားသော့ကိုစားပွဲပေါ်ပစ်တင် ကုလားထိုင်ကို ခပ်ဆောင့်ဆောင့်ဆွဲပြီး ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင် စီးကရက်တလိပ်ဆွဲထုတ်ပြီး သဲကြီးမဲကြီးဖွာနေတယ်။ ကျုပ်ကို လှည့်လဲမကြည့် စကားလဲမပြောဘူး…။
အားကစားပစ္စည်းတွေ ကွန်ဆိုင်းမင့်နဲ့သွင်းပြီး ရောင်းလို့ကုန်ခါနီးမှ ဒေါ်လာဈေး နှစ်ဆခွဲကောက်တက်သွားတဲ့ ၁၉၉၈ တုန်းကတစ်ခါ..။
အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတွေ ခပ်တည်တည်နဲ့ အပ်ငွေတွေပြန်မပေးပဲ အပျောက်ရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ ၂၀၀၃ တုန်းက တစ်ခါ…။
ရွှေဈေး ၂၁၀၀၀၀ ကျော်ကနေ ၁၉၀၀၀၀ ဖြစ်သွားလို့ ဆယ်တုံး – တစ်တုံး ပလုံသွားတဲ့ ၂၀၀၄ တုန်းက တစ်ခါ…။
ဘဏ်ထဲရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေ တပတ် တသိန်းပဲ ထုတ်ပေးတော့လို့ တစ်ရာကို ခြောက်ဆယ့်ငါးကျပ်နဲ့ ဘုရင့်နောင်က ဘဏ်ကြွေးဆပ်မယ့်လူဆီမှာ ခွက်ခွက်လန်အရှုံးခံလိုက်ရတုန်းက တစ်ခါ….။
အော်… ဒီလိုကွန်မြူနစ်များတော့ တရားရစရာ..။
ပစ္စည်းလေးတစ်ဖဲ့လောက် ပါသွားရင်ကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့…
ပစ္စည်းများ တကယ်မဲ့သွားရင် ဘယ့်နှယ်နေမလဲမသိ….။
အဲဒါကတော့ ကြုံလို့ အတင်းတုတ်တာပါ။ တကယ်တော့ ကျုပ်သူငယ်ချင်းလေးခမျာ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ သူတော်ကောင်းလေးပါ။ ကွန်မြူနစ်ဆိုတာကလဲ ငယ်ငယ်တုန်းက အဆောင်မှာ လက်ဝဲစာပေလေးနဲနဲပါးပါးဖတ်လို့ ၀ိုင်းနောက်ပြီးနာမည်ပေးထားတာပါ။ သူ့ခမျာ ကျောင်းပြီး၊ ကိစ္စ၀ိစ္စတွေလဲ ပြီးကတည်းက သမာအာဇီဝကျကျနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားပမ်းစား စီးပွားရှာ – ရှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့နောက်ကလူပေါင်းများစွာသာ သူ့ကို တ၀ီဝီနဲ့ ကျော်တက်ဖြတ်တက်သွားကြတယ်- သူ့မှာတော့ အခုအသက်လေးဆယ့်ငါး-ခြောက် လောက်အထိ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှာ ဖုံတထောင်းထောင်းနဲ့ ကျန်ရစ်နေဆဲပဲ…။
မိန်းမတယောက်၊ ကလေးတစ်ယောက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု့နဲ့လုပ်ငန်းတန်ဘိုးပေါင်းရင် သာသာထိုးထိုးတွက်မှ သိန်းသုံးထောင်တောင် ပြည့်ပါ့မလားမသိ။ တစ်နှစ် ၀င်ငွေလေး သိန်းတစ်ရာ့ငါးဆယ်-နှစ်ရာ ရဘို့ လျှာအလျားလိုက်ထွက်မတတ် ရှာရဖွေရရှာတယ်…။ စီးပွားသာရှာတယ်ပြောတာသာ ဆယ်စုနှစ်သုံးခုနီးပြီ အခုထိ လူတန်းစေ့ဘို့ထားလို့ ခွေးကတက်နားတောင်မရောက်ရှာဘူး…။
ကျုပ်နဲ့တော့မယှဉ်နဲ့လေ…။ ကျုပ်က ကိုယ့်ထမင်းဘိုးပဲ နားအေးပါးအေး ရှာစားနေတဲ့ လခစား…။ သူ့လို သောက်ရူးထပြီး လုပ်ငန်းရှင်မလုပ်ဘူး…။ အဲဒီဒုက္ခတွေခံဘို့ မွေးလာတာမဟုတ်ဘူး..။ အဲဒီသောကတွေလဲ မရှိဘူး…။ အေးအေးနဲ့ ပျော်ပျော်နေတဲ့လူ..။ အရင်ကဆို အိမ်ကကျွေးတဲ့ထမင်းအလကားစားပြီး အခမဲ့ကျူရှင်ဆရာတောင်လုပ်လိုက်သေးတာ..။ တပြည့်မရှား၊ တပြားမရှိ ပီတိကိုစား၊ အားရှိ- မယုံလျှင် ဦးပါလေရာကိုကြည့်……။
ကဲ.. ကဲ.. ထားပါတော့…
ဒီရုပ်ကြီးနဲ့ ရောက်လာမှတော့ အကျိုးအကြောင်းလေး ချော့မော့မေးမှ ဖြစ်မယ်……..
“ အမ်း……။ မင်းဘာဖြစ်လာတာလဲ…? ”
“ ဒါမျိုးတွေ များနေပြီ…ကွ! ”
“ အော်……… ”
“ ဘာ..အော်…. လဲ.. ”
“ မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းကိုစကားထောက်တာပါ။ ငါ့ကိုရန်မလုပ်နဲ့။ ပြောစရာရှိတာ ဆက်ပြော…. ”
တိန် …. ထမင်းစားနေတုန်း .. ဇက်ပိုးအုပ် ခံရသလို .. ဖြစ်သွားရပါတယ်
တကယ်တော့ ဆက်ရေးဖြစ်အောင် အရင် စ ထားလိုက်တာ…။
သူ့ဇတ်လမ်းက ဒီနေ့မှ ဇတ်ရည်လည်မှာ…။
အခုလဲ ညနေ ချိန်းထားပြန်တယ်….:(
ကားပါမစ်တွေ အပုံလိုက် ၀ယ်ထားမိလယ် ထင်တယ်.. မှန်းကြည့်တာ..
ရွာစားကျော် မှန်းတာ မှန်မယ်။
ကြည့်ရတာ မင်းကိုယ်တိုင် ခမျာ လဲ စားလဲဒီစိတ်၊ သွားလဲဒီစိတ် ဖြစ်နေပြီထင်ရဲ့။ အဟိ :-)
ဂျိုကုတ်ရှိရာ…ဂျိုထောင်မလာတဲ့။ မွေမွေချင်းတော့ ခြေမြင်တယ်ဆိုပဲ။
အရူးမ လင်…ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲဟင်။ ပုထုဇဉ်မှန်သမျှ အရူးတွေ လို့ပြောသံကြားဖူးတော့ အားလုံးဟာ အရူးလင်တွေချည်း ဟုတ်ဖူးလား။ ဦးဦးပါ။ ဦးဦးပါ စာဖတ်ရတော့ ကြာနီကန်တရား သွားသတိရတယ်။
နအဖခေတ် ဆိုတာ တခြားအချိန်တွေထက် တရားရလွယ်တယ် ကိုဇောက်ထိုးရေ…
အောက်ပါ စာစုကို ..မဲမဲဘုတို လေသံဖြင့်ဖတ်ပါ…
ဒါဟာ ဘစ်ဇနက်လား ..အဲ့ဒါ ဘစ်ဇနက်လား ..
ဒါလား ဘစ်ဇနက်လားကွယ်.. မင်းပဲပြော …(အချစ်ရေ့..)
ဒါဟာ ဘစ်ဇနက်လား ..အဲ့ဒါ ဘစ်ဇနက်လား..
ဒါလား ဘစ်ဇနက်လားကွယ် ..ပြန်ပြောဦး ….
ကျုပ်တို့ဆီက ဘစ်ဇနက်ဆိုတာ အဲဒါမျိုးလေ ဂီဂီ ရဲ့ … :D
ပတ်တီးလေးတွေ ချိုင်းထောက်လေးတွေနဲ့ ……. :D
သူများ ညစ်နေတုန်း ကိုယ်ပျော်တာ ကောင်းတော့ မကောင်းပါဘူး
ဒါပေမယ့် ပါမစ်မပါပဲ သွင်းခွင့်ရရင်တော့ မော်ဒယ်နိမ့်လေးတွေ ဈေးကျမယ်ထင်တာပဲ
သူဌေးတွေက မော်ဒယ်အမြင့်တွေပဲ ပြောင်းစီးကြတော့မှာလေ
ဒီလိုဆိုရင်တော့ နှာခေါင်းထဲမှာ ကားအနံ့လေးပဲ ရလာသလိုလို
ဒါကလဲ အထင်ပါ … အရူးမ လင်တော်ထားရတာ ခုစာကလေး ခုမုန့်ဆီကြော် ပဲဟာကို …
ကားနံ့လေးကတော့ မှန်ပါတယ် ကိုမှော်ရေ
မြို့ကြီးတွေမှာတော့ ကားတွေကြပ်ကုန်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ကားစီးသူရော၊ တက္ကစီစီးသူရော၊ ဘတ်စ်ကားစီးသူရော၊ ခြေလျှင်လျှောက်သူရော အားလုံးအဆင်မပြေဖြစ်ကုန်မယ့် အရေးလေးလဲ ရှိပြန်သေး…ဗျာ…။
အခု သတင်းတွေ ကြားတာတော့ ကား ကိစ္စ ပြီးတော့ မြေကြီး ကိစ္စ နဲ့ ငွေ တွေ ဆုံး ရှုံးလို့ အထိ နာတဲ့ လူက နာတယ် အော်တဲ့ သူနဲ့ အခု ကား ကိစ္စ လာပြန်ပြီ။
လုပ်တတ်တဲ့ လူတွေကလည်း ချမ်းသာ နေလိုက်တာ.. ပုံမှန်လေးပဲ လည်ပတ်အောင် မနည်းရှာနေရတယ်။ မလွယ်ပါဘူးကွယ်။
ဒီတခေါက်တော့ နစ်နာသူတွေ တပုံကြီး ဖြစ်သွားတော့မှာ ဆူး.. ရေ
ဆူး ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘ၀ မစနိုင်ခဲ့သေးပဲ ကြာနေခဲ့တာ အဲဒါတွေကြောင့် နာဂစ် အလွန်မှာ စီးပွားပျက်ကပ် ဆိုလား ဘာဆိုလားကွယ်.. အဲဒါကြီးက အခြေခိုင်အောင် တည်ထားတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်း ကံတရား လေ အဟွေ့မှာ အကုန်ပျက်စီးပါသွားခဲ့လို့ အချိန် တော်တော်ကြာအောင် ပြန်လည် ပျိုးထောင်နေရတယ်။ ပြန်ဆောက်လိုက် ခိုင်မလားလို့ စောင့်ကြည့်လိုက် ပါသွားလိုက် ဖြစ်နေခဲ့တာ.. အခုတော့ ဘာမှ ကို မလုပ်ရဲလို့ စောင့်ကြည့်နေရတယ်။
ကံများ ဆိုးချင်တော့ ဆက်တိုက် ကို ဆိုးတယ် ဆိုတာ အမှန်ပဲ.. စိတ်မောခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ထက် သူက ပိုမောခဲ့ရတယ်။ ၃နှစ်လောက် အတွင်းမှာ အသက်က သိပ်မကြီးသေးပဲနဲ့ ဆံပင်တောင် ခေါင်းတ၀က်လောက် ဖြူသွားတယ်။ နောက်ထပ် လာမဲ့ အချိန်တွေမှာ ကံကောင်းပါစေပဲ ဆုတောင်းရတော့မယ်။
ဟင်းးး ကြားရတာ ၊ စိတ်မကောင်းပါဘူး မဆူးရယ် ။
ဒီလိုပါပဲ ၊ ဘဝ ဆိုတာ ။
ရန်ကုန်က အဘတို့လို လူလတ်တန်းစား မိသားစုလေးတွေ ခမျာမတော့ ၊
တစ် အိမ်ထောင်ကို ကားတစ်စီးစီ ကတော့ အနည်းဆုံး ရှိကြလေတော့ ၊
အိမ်ထောင်စုတိုင်းကတော့ ကားဈေးထိုးကျတဲ့ ဒါဏ်ကို ခံရတာပဲလေ ။
ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ၊ မိုးပြို အများပဲလေ ။
ကိုပါလေရာကတော့ လုပ်ပီ ကိုးရီးယားကားလို…
ခုတခါလာပြန်ဘီ….. နိုင်ငံခြားငွေ Account ဖွင့်ထားသူတိုင်း ၂၀၀၇ မော်ဒယ်အထက်ကားများ လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိသွင်းလိုသော ကားအရေအတွက်၊ မိမိ တင်သွင်းရာတွင် ကုန်ကျမည့် ငွေပမာဏကိုသာ ငွေစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရဘဏ်များတွင် သာမက ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင်လည်း Account ဖွင့်နိုင်ကြောင်း၊
“န”“ပ”သမားတွေ မျက်လုံးပြူးနေကြရပြန်ပီ…တကဲ့ အရူးမလင်ဘ၀ပါ..
တနေ့က ဂီဂီတင်တဲ့ ပိုစ့်လေးထဲကလိုပဲ..
ကံဆိုးလိုက်၊ ကံဆိုးတာက ကံပြန်ကောင်းလိုက်
အဲဒါက ကံဆိုတာဖြစ်လိုက်၊ ကံကောင်းတယ်လို့ထင်စရာတွေ့လိုက်နဲ့
ကျုပ်ဖြင့် မျက်စေ့ကို လည်နေတာ…
ဒီလူတွေ လက်လှည့်ပြတာကို လိုက်ကိုမမီဘူး……
သိန်းသုံးထောင်ဆို နည်းဗူးဗျ.. ဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင် သုံးသိန်းခွဲ…။ ဒီလောက်ဆို အိမ်ဖိုးတဝက် ကောင်းကောင်းဒေါင်းနိုင်ဒယ်..။ သူ့မှာ ရှိနေဒါ သားလား သမီးလား သေချာပြန်ကြည့်ပေးဘာအုံး..။ ကြောင်ကြီးဂလည်း ခေသူမဟုတ်ပါ.. ခရက်ဒစ်ကတ် ပေါင်းစုံရှိသည်။
အခုမှ ခြောက်တန်းပဲရှိသေးတယ်…. :D
သိန်းသုံးထောင် ပိုင်တာတောင် ခွေးကတက်အဆင့်လောက်ပဲဆိုတော့
ဗိုက်ကလေးတို့ ဘီအီးသမားတွေဆိုရင် မနှိုင်းရဲအောင်ပါပဲဂျာ
ဧကန္တကတော့ အဲဒီလူက ဘီအီးကုန်သည်ဖြစ်ရမယ်
ခွေးကတက်ဆိုတာက သူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ခွေးကတက်ကိုပြောတာ..
နင်တို့ ငါတို့ ပဲ နားအေးတယ်…
ဘာမှနှိုင်းစရာလဲမရှိ ၊ ယှဉ်စရာလဲမရှိ ၊ အေး…ဆေး….. :D :D
ခွင်တည့် သူတွေများ သိန်း ရာဂဏန်းလောက်ကို ကြွေတစ်လှည့် ကြက်တစ်ခုန် ရနေကြတာ အားကျစရာ။
ဒါပေမယ့် သူများတွေလို အစွမ်းအစ မရှိတော့လည်း ကိုယ့်အစွမ်းအစနဲ့ကိုယ် ရသလောက်လေးနဲ့ပဲ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတာ ကောင်းပါတယ်။
တပွဲပြီးတပွဲ လက်ဦးနေတာပါ မမ ရေ
အူးလေးတို့ လို ရသလောက်လေးနဲ့ ပဲ တင်းတိမ်ကျေနပ်နေတတ်တဲ့လူမျိုးတွေများလို့ 
လူဆိုတာ တရားသဖြင့် လောဘရှိရတယ်အူးလေးရ
၀မ်းဒေမတော့ အူးလေးတို့ လို ရသလောက်နဲ့ကျေနပ်နေတဲ့လူမျိုးတွေကို တုတ်တစ်ချောင်းဆောင်ပြီး ကောင်းကောင်းဆုံးမရဦးမယ်
အရေး အသားက လန်းတယ် သရုပ်ဖေါ်တာ စိတ်မျက်စိထဲ မြင်ရပါတယ်
ကွန်မကောင်းလို့ ကိုယ့်ဟာပဲ အသဲအမဲတင်နေတာ
ပြီးမှ တခြားပိုစ့်တွေ လိုက်ဖတ်ရဦးမယ်..။
ဟင် ဦးဦးပါလေရာ တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေပြီ ……… ဒီညနေ တွေ.ပြီး မြန်မြန်ရေးနော်…. :D
အမှန်တော့ ရေးပြီးသားကိုပဲ ပြန်ဖျက်သင့်တာဖျက်ရအောင် တနေ့ခင်း စောင့်လိုက်တာ မိတိုက်ရဲ့…
လုပ်ကြပြန်ပီ။ ဒီရွာသားတွေနှယ့်တော့။ အမြဲတန်းလန်း။ ဖတ်မလို့ကြံခါရှိသေး။ မျှော်တဲ့။ ပြီးသလောက်မန့် ရရင် သိန်း သုံးထောင်ဆိုနဲမှမနဲပဲ။ သများတို့မှာသိန်းသုံးထောင်ဆိုတာအိပ်မက်တောင်မမက်ရဲဘူး။ ဒါတောင်မောနေဆိုတော့။ သများတို့ဆိုမောချက်တော့ပြောဖွယ်ရာမရှိ။
ဦးပါ ဆက်ရေးလာမယ့် ဘောလီဘောပွဲ ကို ဆက်ဖတ်ချင်လှပြီဗျာ။ မြေသမားဘော်လုံးဟာ အောက်ကို တောတော်ကျနေပြီး ကားဘော်လုံးကတော့ အပေါ်လေး တက်မလို့ ရှိသေး…..
အရူးမလင်ဆိုလို့ …. ဗိုက်ကလေး(ပေါက်ဖော်)ကို မဆီမဆိုင်ပြေးမြင်လိုက်မိသေးတယ် ..ပြီးမှ ပို့စ်ရေးသူကိုဖတ်တော့ ဦးဦးပါလေရာဖြစ်နေတယ် အဟိ … ။
ဦးဦးရေ .. ကိုရီးယားကားကျနေတာပါပဲ … ဖတ်တောင်မဖတ်ရသေးဘူး .. ဖြတ်ပြီ .. ဟိဟိ
အူးလေးလုပ်တာနဲ့များမိန်းမက အရူးမဖြစ်ရပါပကောလားဗျာ..
များက လူပြိုဂျီးပါလို့ ပြောလဲ ဘူမှယုံကြဘူး..
အဟီး .. ဗိုက်ကလေးရယ် .. မရယ်နဲ့နော် တိတ် တိတ် … ။
အရူးမကြီးက တော်ကောက်ချင်လို့ .. အိမ်ပေါက်ဝတောင်လာအိပ်စောင့်ဖူးတယ်ဆိုတော့.. မြင်ချင်မြင် ဦးဦးကို မမြင်ပဲ ဗိုက်ကလေးကို မြင်မိသွားလို့ပါ ဟိဟိ … ။ နောက်ပြိး ဟို ခွေးမလင်ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကလည်း ရေးဖူးတော့ နှစ်ခုပေါင်းပြီး ရောသတိရသွားလို့ .. အဟိ .. ဘွာတေးနော် ..
အက်ကို ကြ ဘယ်လိုပြောရပါလိမ့် ။ သမုတ်ကြပါဦး ရွာစားအစ်ကိုတို့ 
ဆက်ရေးပါအုန်းဗျ။ သိန်း ၃၀၀၀ ပိုင်တာတောင် ခွေးကတက်နား ဆိုတော့။ ဒို့ဘ၀များ မြေကြီးထဲဘယ်နှပေ လောက်ဝင်နေပြီလဲ ပြန်ကြည့်အုန်းမှပဲ။ အဟင့် ညစ်လိုက်ထှာ
ဦးဦးပါလေရာ ပြောတာနဲ့ပဲ လုပ်ငန်းရှင်လုပ်ဖို့တော်တော်လေးတောင်စိတ်ညစ်သွားပီ။ အရူးမလင်လိုပဲကို
ပြေးမြင်မိတယ်…. တော်တော်ကိုပြာယာခတ်နေမှာပဲ……..ဟီး…. မှန်လိုက်လေ။ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့
ကြိုးစားရတာတောင် အဲလိုဖြစ်နေပြီ။ လုပ်ငန်းရှင်သာဆိုရင်တော့………………..
“ ဒါမျိုးတွေ များနေပြီ…ကွ! ဆိုတာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောတာဆိုတော့ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ
ပြောတော့ပြောချင်တယ် မပြောတတ်လို့ အဟိ
ဦးပါ နက်ဖြန်တော့ ဆက်ဆက်တင်ပေးနော် ဒီက ဖတ်နေတာ ကောင်းခန်းရောက်မှ မီးပျက်သွားတဲ့ အက်ရှင်
ညစာစားပြီး ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း တင်လိုက်ပါပြီဗျို့….
ရလှခဲ ဆိုပဲ ဦးဦးပါခင်ဗျ
အိုက်ဒီ လူ့ဘွထက် နှစ်ဆလောက်ခက်ထင်ပါ့
အိုက်ဒီ နှစ်ဆလောက်ခက်တဲ့ နှစ်ခါပေါက်ပါမှ
ဦးဦးပါ တငယ်ဂျင်း ခွေးကတက်ကိုမီမယ်ဆိုဒေါ့….
ဦးပါ ပို့(စ်)ကိုပဲ စောင့်တော့မယ်…..